को हुन् अष्ट्रेलियन क्लबमा आबद्ध हुने विवेक ? | Hamro Khelkud
को हुन् अष्ट्रेलियन क्लबमा आबद्ध हुने विवेक ?
काठमाडौँ – अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स स्टेटको नेसनल प्रिमियर लिगको पार्रामात्ता क्लबमा अनुबन्धित भएका २२ वर्षीय विवेक प्रताप पन्त सेन्टर डिफेन्डर हुन्।
२०६९ सालको ‘ए’ डिभिजन लिगमा भक्तपुरे क्लब मध्यपुर युथ एसेसिएसनले पहिलो पटक शीर्ष श्रेणीको लिग खेल्दा विवेक टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी थिए। अघिल्लो सिजनमा मध्यपुर ‘बी’ डिभिजन लिगबाट बढुवा हुँदा विवेकको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेकाले माथिल्लो स्तरमा पनि प्रशिक्षक उपेन्द्र मान सिंहले उनलाई पुरै सिजन पहिलो रोजाईमा खेलाएका थिए।
त्यस सिजन एनसेल कप अन्तर्गत उपाधिको दावेदार मानिएको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई क्वार्टरफाइनलमा पराजित गर्दै मध्यपुरले त्यस समय तहल्कै मच्चाएको थियो।
२०६९ सालको एनसेल कपमा एपीएफविरुद्ध विवेक
लिगबाट मध्यपुर रेलिगेसनमा परेसँगै विवेक त्रिभुवन आर्मी क्लबमा करारमा अनुबन्धित भए। विरेन्द्र सैनिक स्कुलबाट २०६८ सालमा कोकाकोला कप जित्दा टोलीको कप्तानी गरेका विवेकले १८ वर्षको कलिलो उमेरमै आर्मीको पहिलो रोजाइमा खेल्न थाले। उनले १९ वर्षमुनिको राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै देशको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
विरेन्द्र सैनिक स्कुलले कोका कोला कप जित्दा कप्तान विवेक
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने शिलशिलामा विवेक अष्ट्रेलिया पलायन भए। उनले पढाईसँगै खेललाई पनि अगाडी बढाउने जमर्को गर्दै त्यहाँ हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाए। एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गएका विवेकले यसै साता अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स स्टेटको नेसनल प्रिमियर लिग क्लब पार्रामात्तामा अनुबन्धित भए।